Izikhiye Ezintathu Zokuxazulula Inkinga Yezobuchwepheshe Kwezentengiso | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 25, 2018 NgoLwesine, ngo-Okthoba 25, 2018 UJustin Grey
Imvamisa, ubuchwepheshe buba yisibonelo sempumelelo. Ngibe necala lako, nami. I-Tech kulula ukuyithenga ngakho-ke, izwa njengokuthuthuka okusheshayo! Iminyaka eyishumi yokuqala yama-2000s ibimayelana nokungena ngaphakathi, ngakho-ke sigijimele ekumaketheni okuzenzakalelayo ngezandla ezivulekile, ngothuli lwama-oda wokuthenga kanye nemihlahlandlela ecacile - besikade sihamba ngeplatifomu yethu entsha. Sishaye izimpumputhe uma kukhulunywa ngamasu ngoba isu belibonakala lihamba kancane; kwakungeyona i-sexy.
Ukumaketha bekuzohlala etafuleni lemali engenayo nganoma iyiphi indlela edingekayo - bekuyisililo sempi. Kepha ngenkathi iminyaka inyonyoba futhi nezinyathelo ze-ROI ezazithenjisiwe zazingakaze zifike, lezo zikhalo zaphenduka izinyembezi zangempela. Kulula ukukhala ngeMartech lapho ubheka imbuyiselo eyenzayo - ngaphansi kwephesenti eyodwa kukho konke ukuhola kokukhangisa okwamanje kuguqula amakhasimende. Lokho kwehluleka okumangazayo. Futhi uma singazixazululi ngenxa yomsuka walesi sibonakaliso, umsebenzi wokumaketha usengozini yokuqedwa, cishe ngaphambi kokuthi kuqale.
Kubalulekile ukuthi sihlasele le nkinga kumthombo oyinhloko, njengoba abathengisi bezobuchwepheshe abaxhaswe kahle bathambekele ekususeni icala entweni evumela ukuthengwa kwesoftware eningi, njengezinguquko ekuziphatheni komthengi. Okuwukuphela koshintsho lweqiniso oludinga ukwenzeka yindlela yokumaketha. Ukuze uphumelele ekumaketheni, futhi uphumelele ngempela ebhizinisini, kufanele unikeze umcabango olinganayo nowenhloso kuzinto ezintathu ezilawula leyo mpumelelo: isu lakho, ubuchwepheshe bakho, namaqhinga akho. Futhi zonke zidinga ukuqondaniswa, kuyo yonke ibhodi.
Ngakho-ke, ngabe lokho kubukeka kanjani? Ngiyajabula ukuthi ubuzile. Nakhu ukuthatha kwami.
Isu: IDomino yokuqala
Akunandaba nesihloko sakho somsebenzi, udinga ukuqonda isu eliphakeme lenhlangano yakho. Ngokwemigomo ye-layman, yiziphi izinhloso zokugcina zebhizinisi? Abakhangisi, abathengisi, abantu bamakhasimende… wonke umuntu eqenjini lakho kufanele ayazi impendulo yalo mbuzo obucayi. Kufanele kube yinto yokuqala wonke umuntu ayaziyo, ayayiqonda futhi ayikhathalelayo. Uma lokhu kungachaziwe kahle, buza: Yini esizama ukuyizuza? Yiziphi izigaxa zethu zokukhula eziphambili? Ngokusobala, isinyathelo esilandelayo sihilela ukuqonda ongakwenza nsuku zonke ukusiza ukufeza lelo su lokukhula. Ngamafuphi, yiba ushintsho ofuna ukulubona ebhizinisini.
Lokhu kufeza izinhloso ezimbili:
Ukuqinisekisa ukuthi usebenzisa isikhathi sakho usebenza ezintweni ezibalulekile.
Ukuyeka ukwenza noma yini engakwenzi. Kuzwakala kulula, kepha uzomangala ngomthamo womsindo okhona emabhizinisini amaningi ngenxa yokunqamuka okuyisisekelo phakathi kwecebo namasu. Uzobona ukushintsha okumangazayo uma usuqala ukusebenza kusuka endaweni yamasu kuqala. Esikhundleni sokumaketha ukujabula ngomsebenzi owenziwa kanye, njengokubamba umcimbi, bese usebenza ngawo ngaphandle kwenhloso ecacile obonakalayo… uzomisa isikhashana. Uzobuza: Sifuna ukufeza ini? Sifuna ukubandakanya bani? Kungani lo mcimbi esikhundleni sesinye isinyathelo?
Sivame ukuzwa ngamabhizinisi we-B2B aphishekela isu lamanani wokuphila kwamakhasimende, lapho ahlose ukukhulisa imali nokuzibophezela kumakhasimende akhona esikhundleni sokuthola amasha. Intambo yendwangu yenhlangano yabo yonke kufanele ngabe iphathelene nokuthonya ukuqhuma okungalungile. Lapho usetha isu lakho, bese usetha imephu yomgwaqo ehambisanayo kusukela ekuqaleni, uzoqala ukukhipha ngisho nezinhloso zakho eziphakeme kakhulu isihogo ngokushesha okukhulu kunalokho obungeke ukwenze.
Inqubo: Isoseji Lenziwa Kanjani
Ngemuva kwesu kuza ukwenziwa, futhi ilambu eliqondisayo lokwenza inqubo ecatshangwe kahle. Uma isu lakho limayelana nenani lempilo yekhasimende, njengesibonelo engisisebenzise ngenhla, ungahle ugxile ku-laser kunqubo yokuqina yamakhasimende eqinile, ephindaphindwayo nenqubo yokuthuthukisa i-akhawunti. Uzobhala ukuthi ungamaketha kanjani kumakhasimende akho akhona kuzo zonke izigaba ezahlukahlukene zokuvuthwa, bese ubala imephu ukuthi ungaziphatha kanjani ohambweni onalo engqondweni.
Isibonelo, ngemuva kokuthi othile athenge izixazululo zakho - yini elandelayo? Nakhu lapho uthola khona ukuthi uhlu ngalunye lohambo lwakho lwamakhasimende lubukeka kanjani. Masithi ikhasimende lithenga uMkhiqizo X futhi isinyathelo esilandelayo sinikeza ukuqeqeshwa kokuthi ungaphumelela kanjani ngawo. Ngemuva kwalokho kungahle kufundise ikhasimende ukuthi kungani lingadinga uMkhiqizo Y, futhi liwalungiselele ukuthenga nokuqalisa. Uma uhlela inqubo ecacile futhi uvumelanisa iqembu lakho nxazonke zalo, futhi liqhutshwa isu lakho eliphakeme, ikhasimende lakho lizolibona kangcono inani lakho. Lokhu kudinga inhloso nokuzinikela kanzima ekugcineni isu lakho liseqhulwini.
Futhi ekugcineni - isitaki sakho sobuchwepheshe (ngiyazi, ubunethemba lokuthi sizofika kule ngxenye). Okokuqala, qaphela ukuthi ubuchwepheshe bakho buza isithathu kulolu hlelo. Kusengxenyeni yeqembu lamaphupho, kepha akuyena umdlali oqala. Okwesibili, yazise ngengxenye okufanele iyidlale - a ukusekela indima. UJill Rowley, umphathi omkhulu wokukhula eMarketo udumise kakhulu ukuthi:
Isilima esinamathuluzi sisalokhu siyisiwula.
Ngingathatha igxathu eliqhubekayo bese ngithi iqiniso libi kakhulu, njengoba lowo muntu manje eyi- esiyingozi isiwula.
Inqubo embi, enqanyuliwe kumasu, iresiphi yomlilo eqinisekile yokwehluleka lapho ungeza esikalini nasekuzenzekelayo kobuchwepheshe. Uzophuma kude nomkhondo, ngokushesha - futhi uzolimaza umkhiqizo wakho. Ukulinganisa kwakho ukuthi isu lakho nezindlela zakho ziphumelele kangakanani kufanele kuqiniswe yisitaki sakho sobuchwepheshe. Amasistimu akho kufanele athathe idatha yakho, ukuze ukwazi ukuyicubungula bese wenza izinqumo ezihlakaniphile zokuthi ungaqhubeka yini nenkambo okuyo noma ulungiselele inkambo.
Ukuze wenze lo msebenzi, ukumaketha kudinga umugqa ocacile wokubuka kwamanye amapulatifomu wedatha yamakhasimende. Akwanele ukuba umnyango ngamunye usebenzise ubuchwepheshe bawo nje kuphela; kufanele futhi yakhiwe ngendlela ukuze idatha idluliswe futhi iphume phakathi kweminyango ngendlela ezwakalayo. Lapho uhlela amasistimu akho ukuze uqinise inkomba yakho yezindlela nezindlela zakho, ukhulisa inhloso yayo. Kungahle kungabi obukhazikhazi njengokwenza ubuchwepheshe inkanyezi, kepha kuzokusiza ukuthi wenze okwengeziwe futhi uthole imiphumela.
Izinhlangano eziningi zingahlosile zigcina ngokugxila kokukodwa kwalezi zinto ezintathu bese zishiya ezinye ezimbili ziphela zibe mnyama. Noma, okubi kakhulu, bazama ukuphatha bobathathu - kepha ngamasilo. Lapho kwenzeka noma yisiphi isimo, iqembu lakho alihlelelwe impumelelo. Esikhundleni salokho, ungasheshisa imali yakho ngokubeka isu phambili, kulandelwe inqubo nobuchwepheshe - ngaleyo ndlela futhi njengezingxenye ezintathu zethimba elifanayo, elihambisanayo. Le yindawo enhle, futhi lapho uzothola khona impumelelo yokwakheka - nokusheshisa.
Tags: ujill rowleyukwenziwa kwezimaketheinqubo yokumakethamarketing isuubuchwepheshe bokumakethaumabhebhanamartechisitaki se-martechUbuchwepheshe
UJustin Grey ungusomabhizinisi owuchungechunge kanye ne-CEO nomsunguli we UmholiMD, okuyisikhungo esikhulu kunazo zonke sokusebenza kwemali engenayo, esisebenzise ngaphezu kwesigamu sabasebenzisi bakwaMarketo. UJustin wenze umsebenzi wokwethula izinkampani eziphumelelayo nokuzikala, ngokuphuma ngempumelelo okungaphezu kuka-200MM + kule minyaka eyishumi edlule. Umzamo kaJustin wakamuva wethule ngo-2016 ngesikhathi esungula ngokubambisana Izitini Eziyisithupha, isiqalo sokufunda online esenzelwe ukulwa nomqashwa kanye nabathengi ngamakhasimende ngemfundo esekwe kulwazi. Eminyakeni eyishumi eyedlule, uJustin uvele njengezwi eliqinile kwezamabhizinisi, ukumaketha kanye namasiko. Njengesikhulumi esaziwayo, uJustin ushicilelwe izikhathi ezingaphezu kwezingama-10 ezincwadini zomkhakha futhi uphethe ikholomu yakhe, iTribal Knowledge, ku-Inc., ngenkathi ebhalela i-Entrepreneur, Tech Crunch nabanye. UJustin nomkakhe uJennifer bahlangana ngokukhangisa futhi eminyakeni emithathu kamuva bamukela indodana yabo, uGrayson, emhlabeni ngo-Ephreli ka-350.